Araka ny lazain'ny olon'ny fahendrena dia mora kokoa ny misoroka toy izay hanandrana hanasitrana azy. Ary satria ny vehivavy ankehitriny dia mitarika lamaody mafonja ary manao kiraro avo lenta , matetika dia mahatsapa ny tsy fahamendrehana sy ny reraka ny tongotra, izay mitarika ho amin'ny vokatra lehibe kokoa. Mba hisorohana na hisorohana ireo olana rehetra ireo, ny dokotera dia manoro hevitra amin'ny fampiasana fitaovana matevina. Misy vokany mahasoa tsy amin'ny tongotra fotsiny ihany, fa amin'ny zavamananaina manontolo ihany koa.
Ny fitsaboana avy any atsinanana, izay namolavola ny teoria amin'ny teboka akupuncture, dia mampifandray ireo sehatra reflexogenic amin'ny tongotra miaraka amin'ny taova rehetra. Nandritra ny famonoana dia navotsotra avokoa ny hevi-borona rehetra, angamba izany no antony mahatonga ny fako tsy mitondra voka-tsoa amin'ny zavamananaina manontolo. Indrisy anefa fa tsy azo atao izao ny mampihetsi-po anao amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny saha ety an-tany, ka nanjary fitaovana tsara indrindra ny fantsom-panafody. Ny fampiharana ny vokatra ara-pahasalamana, dia hanampy amin'ny fanafoanana ny reraka sy ny fihenjanana avy amin'ny tongotra izy ireo.
Ny fampiasana fitaovana matevina
Tsy ho tara loatra mihitsy ny hanomboka hikarakara ny tongotrao. Ary noho izany dia azo atao tsara ny zavatra rehetra (afa-tsy ny vehivavy bevohoka, izay tsy mifanentana amin'izany). Na izany aza, amin'ny voalohany dia afaka ampiasaina mandritra ny roa na telo ora isan'andro izy ireo, mampitombo tsikelikely ny fotoanany.
Ny plastika sy ny silicone no tena ampiasaina, ary misy teboka mipetaka amin'ny famoronana fiantraikany amin'ny masajara sy ny fampiharana ireo hevi-borona.
Vita amin'ny baolina matevina:
Manatsara ny fivoaran'ny ra, ka manakana na manamaivana ny fihenan'ny vina varikose;
manamaivana ny fihenjanana, ny fivoahana na ny fahaverezan'ny tongotra;
mandray anjara amin'ny fanadiovana ny lymph, ny fantson-dra sy ny kapila;
manatanjaka ny asan'ny rafi-kadoa;
manadio ny tsinay ary mamerina ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinalina (tavoahin'ny gastrointestinal);
manatanjaka ny hery fiarovana ary mampitombo ny fanoheran'ny vatana amin'ny aretina isan-karazany;
misy fiantraikany amin'ny aretina vokatry ny hazavana (radiculitis, osteochondrosis);
Mifehy ny haavon'ny siramamy ao amin'ny ra;
noho ny fiakaran'ny rà fampidiran-dra, dia tsy mitsahatra ny mangatsiaka sy mafana;
Misy vokany mahasoa eo amin'ny maso.
Ny fampiasana fitaovam-pandrefesana matevina dia hanampy amin'ny fanesorana olana maro efa misy ary misoroka ny fisian'ny aretina vaovao.
Gold watch "The Seagull"
Sakafo ho an'ny antontan-taratasy
Lamina modely ho an'ny solomaso
Fampivoarana lalao ho an'ny olon-dehibe
Cheesecake miaraka amin'ny henomailala - recipe
Trano ho an'ny zaza vao teraka
Kitapo sigara - tsara sy ratsy
Ny hernia nerôlika amin'ny kisoa
Nahoana no manjombona ny fantsika?
Modely amin'ny solomaso 2014
Mihidy varavarankely ho an'ny loggia
Ahoana no mahatonga ny lehilahy iray mifankatia amin'ny kansera?
Tranolay mody 2014
Amorphophallus - fikarakarana any an-trano
Salady miaraka amin'ny tavoahangy sy ny renirano
Banana Smoothies Strawberry
Ny brasele ny lehilahy amin'ny tanany
Mahasosotra ny manao firaisana rehefa teraka